Tauroursodeoxycholic acid (TUDCA) အမှုန့် (14605-22-2) hplc≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / အခြားသူများက / Tauroursodeoxycholic acid (TUDCA) အမှုန့် (14605-22-2)
rating: SKU: 14605-22-2. အမျိုးအစား: အခြားသူများက
AASraw သည် CGMP စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ခြေရာခံနိုင်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အောက်ရှိဂရမ်မှ Tauroursodeoxycholic acid (TUDCA) အမှုန့် (14605-22-2) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်အရပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းစွမ်းရည်ရှိသည်။
Tauroursodeoxycholic acid (TUDCA) အမှုန့် (14605-22-2) ဗီဒီယို
Tauroursodeoxycholic acid (TUDCA) အမှုန့် (14605-22-2) Specification:
ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ: ထုတ်ကုန်အမည်: Tauroursodeoxycholic acid (TUDCA)
CAS အမှတ်: 14605-22-2
နာမ်:Tauroursodeoxycholic acid, TUDCA, Tauroursodeoxycholate, Taurolite
သိုလှောင်မှု: အလင်းနှင့်အစိုဓာတ်မှ -20 ° C တွင်သိုလှောင်ထားပါ
Tauroursodeoxycholic acid (TUDCA) အမှုန့် (14605-22-2) Description:
တရုတ်ဆေးပညာသည်“ အပူ” ရောဂါများကိုကုသရန်အတွက်နှစ်ပေါင်းရာနှင့်ချီ။ တိရိစ္ဆာန်အသည်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ချောင်းဆိုးခြင်းသက်သာခြင်း၊ အဖျားတက်ခြင်းနှင့်အမြင်အာရုံတိုးတက်စေရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ သဘာ ၀ ကိုသည်ကိုလက်စထရောလ်မှတစ်ဆင့်ဖန်တီးသည်။ ၎င်းတွင် taurochenodeoxycholic acid၊ ursodeoxycholic acid နှင့် chenodeoxycholic acid တို့ပါဝင်သောဒြပ်ပေါင်းများပါဝင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ UDCA နှင့် TUDCA တို့ကိုဂျပန်နိုင်ငံတွင် ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်။
Tauroursodeoxycholic acid အမှုန့်သည် ursoodeoxycholic အက်ဆစ်မှဆင်းသက်လာသည်းခြေရည်အက်ဆစ် taurine conjugation ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လူ့ဇီဝြဖစ်ပျက်မှု၊ ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောအရာတစ်ခု၊ အာရုံကြောကာကွယ်သည့်အရာ၊ apoptosis inhibitor၊ ၎င်းသည် ursodeoxycholic acid မှရရှိသည်။ ၎င်းသည် tauroursodeoxycholate ၏ conjugation အက်ဆစ်ဖြစ်သည်။
Tauroursodeoxycholic Acid (TUDCA) သည်အသည်းအကူအညီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ThermoLife မှ Liver Longer ထုတ်ကုန်တွင်ဖြည့်စွက်သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် cholestasis ကိုကာကွယ်ရန်အတွက်အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁၇ alkylated steroids သည်အဓိကအန္တရာယ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Tauroursodeoxycholic Acid (TUDCA) သည် ambiphilic bile acid ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် taurine conjugation ပုံစံဖြစ်သော ursodeoxycholic acid (UDCA) ဖြစ်သည်။ လူသားများတွင် TUDCA ပမာဏအနည်းငယ်ရှိသည်။ သို့သော်ဝက်ဝံများတွင် TUDCA ပမာဏများစွာပါရှိသည်။ TUDCA သည် apoptotic သက်ရောက်မှုများလျော့နည်းလာပြီးနှလုံးလုပ်ဆောင်မှု၊ Huntington ရောဂါ၊ ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်လေဖြတ်ခြင်းများကိုကူညီသည်။ မကြာသေးမီက TUDCA သည်မျက်စိတွင်အကာအကွယ်သက်ရောက်မှုများရှိခဲ့သည်၊ အထူးသဖြင့် retinal degenerative disorders ။
Oveson BC, Iwase T, Hackett SF, Lee SY, Usui S, Sedlak TW, Snyder SH, Campochiaro PA, Sung JU (2011) ။ "သည်းခြေ, bilirubin နှင့် TUDCA ၏ပါဝင်သူများ, oxidative စိတ်ဖိစီးမှု - သွေးဆောင်လွှာယိုယွင်းဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်" ။ ဂျေ Neurochem ။ 116 (1): 144-153 ။ Doi: 10.1111 / j.1471-4159.2010.07092.x ။ PMC 4083853. PMID 21054389 ။
Duan, WJ, Zhang, FK, Ou XJ, Zhang, T, Wang, XM, Wang, Y, Cui, Y, Zhao, XY, Jia, JD (2011) ။ "[ursodeoxycholic အက်ဆစ်တစ်ခု suboptimal ဇီဝဓါတုဗေဒတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူမူလတန်း biliary အသည်းခြောက်၏လက်တွေ့ profile များကို]" ။ Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi 19 (2): 118-120 ။ Doi: 10.3760 / cma.j.issn.1007-3418.2011.02.011 (မလှုပ်မရှား 2019-08-20) ။ PMID 21492515 ။
Woo SJ, Kim JH, Yu HG (2010) ။ Ursodeoxycholic acid နှင့် tauroursodeoxycholic acid တို့သည်လေဆာဖြင့်ကုသသောကြွက်များတွင် choroidal neovascularization ကိုနှိမ်နင်းသည်။ J ကို Ocul Pharmacol Ther ။ 26 (3): 223-229 ။ Doi: 10.1089 / jop.2010.0012 ။ PMID 20565307 ။